Daawo:Telefeshinka Al Jazeera oo Warbixin Murugo leh ka diyaariyay Burburka dhaqaale ee Soomaaliya kajira, Faqri iyo shaqa la'aan dilootay dhalinyarada Muqdisho.
Wednesday August 10, 2016 - 13:35:14 in Wararka by Super Admin
Barnaamijka dhaqaalaha iyo dadka ee ka baxa Telefeshinka Afka Carabiga ku hadla ee Al-Jazeera ayaa lagusoo qaatay xaaladda dhaqaale ee dalka Soomaaliya.
Wariye Cumar Faaruuq oo barnaamijka kasoo diyaariyay magaalada Muqdisho ayaa ka diiradda saaray xaaladda dhaqaale ee dalka kajirta.
Barnaamijka (Dhaqaalaha iyo Dadka) ayaa lagusoo bandhigayaa wareysiyo iyo tira koobyo dhanka dhaqaalaha soomaaliya ah oo muujinaya sida dhaqaalaha Soomaaliya u burburiyay.
Magaalada Muqdisho ayaa ah meesha ugu daran ee sicir babarku saameeyey bulshada, ganacsato iyo dad shacab ah oo ku nool degmooyinka gobolka Banaadir ayaa Barnaamijka lagusoo bandhigayaa kuwaasi oo sheegaya in meeshii ugu xumeed uu marayo dhaqaalaha dalka Soomaaliya.
Dekadda iyo garoonka diyaaradaha caalamiga Muqdisho oo ah kaabayaasha dhaqaalaha caasimadda waxaa gacanta ku haya shirkado laga leeyahay dalka Turkiga kuwaasi oo qaatay 45% dhaqaalaha kasoo xarooda ilahaasi dhaqaale ee dalku leeyahay, 55% lacagta dekadda iyo garoonka waxay ku dhacdaa akoonno ay leeyihiin madaxda dowladda Federaalka.
Waxaa meesha ka baxay khoondadii dowlad looga baahnaa ee qasnadda bulshada soomaaliyeed kusoo noqon laheed taasi oo keentay in dhaqaalihii dalka burburo.
Badeecadihii ay ganacsatada soomaaliyeed dibadda kasoo dhoofsan jirtay ayuu hoos dhac ballaaran ku yimid taasi bedelkeed dowladad Turkiga ayaa dalka kusoo xaaqday badeecado liita oo rakhiis ah taasi waxay suuqa ka saartay ganacsigii baayac mushtarka soomaaliyeed.
Waddooyinka Muqdisho waxaa lagu arkayaa kumanaan qof oo dawarsanaya, suuqayada waaweyn ee ganacsiga caasimadda waa kuwa ladaalaa dhacaya xakaar dhanka dhaqaalaha ah.
Iibsiga badeecadaha ayuu hoos udhac ku yimid sababa la xiriira dakhliga maalinlaha ah ee soo gala shacabka oo aad u yar taasi oo keentay in muwaadinku uu waayo wax uu noloshiisa ku maareeyo.
Waa ciriiri dhanka nolosha ah oo bulshada gobolka Banaadir ay wajaheyso kadib markii ay ka tageen waajibkii ka saarnaa in diinkooda iyo dalkooda difaacaan.
Qaar katirsan dadka lagu wareysanayo Barnaamijka (dhaqaalaha&dadka) waxay sheegayaan in duruufaha dhaqaale ee dalka kajira aysan 100 sanadood soo marin islamarkaana xilligii dagaalka sokeeye dalka ka socda iyo maanta oo la joogo 2016 uu dhaqaaluhu liito hadda.
Dhulka Beerashada ku wanaagsan ee Soomaaliya waa 8 Milyan oo Hiktaar
Laf-dhabarta dhaqaalaha soomaaliya waa dhaqashada xoolaha nool iyo beerashada dalagyada maxalliga ah, dhaqaalayahanadu waxay sheegaan in soomaalidu ay leedahay dhul beerashada ku wanaagsan oo gaaraya 8-Milyan oo Hiktar balse soomaalida ayaa dhulkaasi hodonka ah beerta oo kaliya 1% waana ayaan darro heysata soomaalida qeyb weyna ka ah hoos u dhaca dhaqaalaha dalka.
Dalka sidaasi Hodonka u ah ayay malaayiin soomaali ah ka baahanyihiin oo ay gaajo aawgeed uga qaxeen dalkoodi ayna u gacma hoorsanayaan dowlado shisheeye!.
Dhulka labeerto ee Soomaaliya hadda waa 1%
Soomaaliya cuntada laga cuno 80% waxaa lagasoo dhoofiyaa dibadda halka wax soo saarka dalagga maxalliga uu yahay 20%!.
Madaxda Dowladda Federaalka iyo qolooyin qurba joog ah ayaa warbaahinta ka faafiyay xayaysiismo been ah oo dad badan lagu dhagray sida "Mogadishu is Rebuilding” oo macnaheedu yahay Muqdisho dib ayay u dhismeysaa.
Soomaaliya ayaa dibadda cuntada ay cuntay dibadda kasoo dhoofsata 80%
Qurba Joogta ayaa lacago malaayiin dollar ah geliyay caasimadda waxay dhiseen hoteello waaweyn iyo carwooyin laga tukaameysto waxay faafiyaan ribada iyo ganacsi aan xalaal aheyn arrinkaasi oo bulshada Muqdisho ay eedday.
Haa waa sax Muqdisho waa dhisantahay waddooyin bilic leh iyo daara dhaadheerna waa laga heli karaa laakin daarahaasi dadka ku dhax nool maheystaan dhaqaale ku filan oo ay noloshooda ku maareeyaan jawaabta ayaa ah maya.
Qoyska soomaaliga ee nolosha meel dhaxaadka ah kunool maalintii wuxuu heli karaa 2$, Boqolaal kun oo dad daynar ah ayaa nolol ciriiri ah ku sugan waxaa usii dheer dhibka ay kala kulmayaan ciidamada shisheeye iyo maleeshiyaadka DF-ka.
Sanaddii 2011 markii ay abaarihii laayaanka ah ku dhufteen gobollo dhaca Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ayay dowladda Turkiga heshay fursad ay kusoo faragelinayso Soomaaliya waxayna ixtilaashay oo ay la wareegtay dhaqaalaha dalka.
umad haddii la gumeysanayo waa in dhuunta laqabtaa haddii kale gumeysiga ayay ka baxsanaysaa, Itoobiya iyo xulufadeeda kuma guuleysan in ay gumeysiga kusii hayaan soomaalida sababa laxiriira ganacsiga dalka oo ahaa mid xowlli ku socda laakin Turkiga hadda gumeysi qaboow ayuu ku hayaa dalka.
Shaqa la'aanta ayaa ah midda ugu daran oo ay wajahayaan malaayiin kamid ah dhalinyarada ku nool magaalada xamar,ardayda jaamacadaha ka qalin jabista maheystaan goobo ay ka shaqeeyaan badankood waxay door bidaan in ay u tahriibaan wadamada dibadda.
Daraasad la sameeyay waxay muujinaysaa in 75% dadka soomaalida ay yihiin kuwa Baagamuunddo ah oo aan haysan wax shaqa ah.
Muuqaallada kale ee muujinaya in dhaqaalaha soomaaliya uu hoobtay waxaa kamid ah lacagta dollarka oo noqotay midda ugu badan ee shacabka soomaaliyeed wax ku kala iibsadaan halka lacagta shilin soomaaliga iyadoo sakaraat ah kusoo koobantay 1000 shillin "Kunaa ugu yar kunaanaa ugu weyn”.
Hoos ka daawo Barnaamijka dhaqaalaha iyo Dadka oo soomaaliya lagusoo qaatay ama halka Guji
Wiil dhalinyara ah oo si Arxan darra ah loogu dilay Muqdisho.